Dubbi dibbee lolaa Abbayyaa: Gaafa lolaa Kan yaamamuuf Kan dhumu oromoodha. – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioDubbi dibbee lolaa Abbayyaa: Gaafa lolaa Kan yaamamuuf Kan dhumu oromoodha.
Dubbi dibbee lolaa Abbayyaa: Gaafa lolaa Kan yaamamuuf Kan dhumu oromoodha
Dubbi dibbee lolaa Abbayyaa
Gaafa lola Baadimmee sanas lolli sun Oromoo akka hin laallanne karaa SBO ummatatti lallabaa baane. Akkuma jennes bu’aa lola sanii garree jirra. Kasaaraa rifaasisaa ture. Lubbuu 70, 000 tahu kan gama Itoophiyaatiin bilaashitti bade san mee har’a haa yaadannu. Lafa fuula adurree hin geenye Baadimmee jedhamtu sababfatee warri lola walitti bane humnoota TPLF fi Shaabiyaa turan. Har’a namni Baadimmee yaadataa jiru jiraa? Hin jiru! Jarri waan wal dhabaniif qabu turani. Sun dantaa gidduu jaraa malee dantaa Oromoo hin turre. Har’a biyyootni lamaan eega araaramanii booda lubbuu 70,000 bade san nanmni yaadataa jiru jiraa? Hin jiru! Wareegamni sun wareegama bilaashaa tahuu isaa caalaatti kan ibsu ammoo waggaa 20 booda kan dhiifama gaafatee kadhatee araarame Eertiraa osoo hin taane Itoophiyaa tahuu ishiiti.
Gaafas Mallas Zeenaawii saamicha qabeenya Itoophiyaa irratti kan masaanuu itti taate Eertiraa ofirraa ari’uuf jecha tahe jedhee lola Baadimmee uume. Sabboontota Oromoo kuma kudhanoota ”ergamtuu Shaabiyaa” taargaa jedhu itti maxxansee ajjeese, hidhe, naaffise, luka irraa cire. Gariis biyya irraa baqachiise. Gabaabinumatti sabboontota Oromoo dhabamsiisuuf itti fayyadame. Sababa sobaa ”Lafa keetu weerarame” jedhuun lola labsee masaanuu isaa ofirraa fageessee saamicha dhunfaan geggeeffachuuf fayyadame. Ittis milkaahuun isaa hin haalamu.
Har’as dhimma hidha Abbayyaa jala gugatamee dibbeen lolaa dillifamaa jira. Abiy Haamad hookkara harkumaan biyya keessatti babal’isaa jiru gara dabarsee qalbii ummataa alatti deebisuuf jecha kaardii Abbayyaatiin taphachaa jira. Dubbiin kun akka yeroo kanatti ho’u kan godhaa jiru isuma mataa isaati. Sanas waan itti dhimma bahuu barbaadeef qaba. Waanuma bittoota duraanii keessattuu abbaa isaa Mallas Zeenaawii irraa dhaale fayyadamaa jira. Rakkoo keessoo biyyaa rukutanii ukkaamsuun irra aanuuf jecha rakkoo alaa uumanii afarsuun toftaa ittiin kooraa aangoo Itoophiyaa jabeeffatanii dha. Ammas kanumatu tahaa jira. Haleellaan ABO irratti tahaa jiru ragaa tokko. Kan itti aanuu malus ragaa dabalataa ti.
Oromoon bara baraan gowwoomfamee lola waamamee akka bishingaa gad haamamuun kana booda hin hojjetu. Lola siyaasaaf tolfatan yoo barbaadan ofumaaf haa lolatan. Yoo isaan baaseef. Oromoon rakkoo belbeltuu kan mataa isaa harkaa qaba. Diina alaa caalaa diina keessaa isa guggubee dhabamsiisaa jiru ofirraa buqqisuuf dursa kennuu qaba. Akka ummata of danda’ee mirga isaa guuttatee dhaabate tokkotti eega hafuura bilisummaa mirkaneeffatee booda diinni alarraa isa barbaadu yoo jiraate gaafas deebii kenna. Oromoon lola ofii isaa lolatee hin xumurin qaba. Sana eega xumuratee booda qofa lolli dantaa isaa tuqu yoo dhufe owwaata.
OMN: IBSA ADDA BILISUMMAA OROMOO(ABO) haala yeroorratti. /Bitootessa 4/2020/
Gaafa lolaa Kan yaamamuuf Kan dhumu oromoodha. Ethiopia saniif dhalli keenya baroota dheeraa irraa hanga hardhaatti dura bu’ee Ittii dhuma, garuu immoo galatnii sabni Kun argatu yoo jiraate, maqaan isaa hundi awwaalamee, maatiif sabnii isaa dararaadhaan gabromaa jiraachuu qofaadha.
Lola gaafa mililiki miti loluma gaafa ETHIOF ERTIRAA kana jidduutti Saba oromoo dhumeef maqaan isaanii dhahamuuf leellifamuu agartanii beektuu??
Tokkoolleen hin jiru.
Mindaadhaaf tooftaadhaan sobamnee, dhala keenya hundaa ETHIOPIAf jecha gabbarruu hin qabnu. Kanaan booda dhaloota BILISSUUMMAA LAMMIIFII OROMIYAA isaatiif wareegama seenaa qabdu kaffaluuf jiraachaa jiru malee, gowwaa sabni isaa gabroomee halagaa BILISOOMSUUF HARREE isaaniif ta’u hin qabnu.
Yoo loluun barbaachise, WALLOO NAANNOO OROMIYAA jalatti deebiisuu, FINFINNEE handhuura oromiyaa Moottuummaa NAANNOO OROMIYAA jalattii deeffachuu, DIRREE DHAWAA lafa oromoo oromiyaa jalattii deebiisuuf qabsoo tolaas ta’ee qabsoo lolaa geggeessuu ni dandeenya.
Tarii Erga BILISOOMNEE akkuma sabni kuun bilissuummaan Ethiopia keessa jiraataa jiruttii erga jiraachuu eegalleen booda nus Ethiopia Jenna.
Addi Bilisummaa Oromoo Hoogganoota Kiyya Ol’aanoo Irratti Yaaliin Ajjeechaa Geggeessamee Ture, Jedhe
Adda Bilisummaa Oromoo: Hoogganoota Kiyya Ol’aanoo Irratti Yaaliin Ajjeechaa Geggeessamee Ture
FINFINNEE — (voaafaanoromoo)–Addi Bilisummaa Oromoo har’a waajira isaa muummicha, magaalaa Finfinnee, Gullalleetti argamutti ibsa gaazzexeessoftaaf kenneen, mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota dhaabichaa hiraarsee akka hidhaa jiru dubbate.
Sanbata dabre kana jechuun Guraandhala 29, bara 2020 poolisiin halkan hoogganoota ABO irratti mana isaaniitti yaalii ajjeechaa deemsisee jira, jedha – ibsi dhaabbatichi baase. Dhaabbatni mirga dhala-namaaf falmu ka sadarkaa addunyaa, Amnestii Internaashinaal, hidhaan jumlaa mormitoota irratti keessumaa hoogganoota ABO irratti ka deemsisamaa jiru tahuu ibsee, kan humnoota mootummaatiin Sanbata dabre qabame – hoogganni ol’aanaan dhaabichaa, Obbo Abdii Raggaasaa, yeroo ammaa eessatti akka hidhamanii jiran beeksisuun mootummaa irraa eegama, jedhee jira.
Itti-gaafatamaan waajira dhimmoota Koomiyunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, Obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin, “Obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ni beekama. To’annaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa jala,” jedhan.
Pre-election rigging has began…Across Oromia/ Ethiopia by Abiy Ahmed’s Prosperity Party Security Forces!!!!!! https://t.co/U8FgWvTw2g pic.twitter.com/yQuo7sR9rB
Ethiopia: Police must account for missing Oromo opposition leader https://t.co/aCs8GXua5L pic.twitter.com/imMlfnpVJG
— Kichuu (@kichuu24) March 3, 2020
Bilisummaa fi Dimookiraasiin Addunyaarraa Gad-adeemaa jira, Jedha Gabaasaan Sadarkaa Addunyaa Haarawa Bahe